မမတွေရဲ့အသည်းကိုဖမ်းစားမယ့် အသက် (၁၁) နှစ်အရွယ်ကလေးမော်ဒယ်လေး ကောင်းခန့်လှိုင်
April 30, 2019 Cele Love 0
မမတွေရဲ့အသည်းကိုဖမ်းစားမယ့် အသက် (၁၁) နှစ်အရွယ်ကလေးမော်ဒယ်လေး ကောင်းခန့်လှိုင် ခန့်လေးလို့ လူသိများတဲ့ ကလေးမော်ဒယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းခန့်လှိုင်ကတော့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပေမဲ့ Junior Teen Mr. International Myanmar ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းခန့်လှိုင်ကတော့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် Modeling ပိုင်းမှာ […]
၀မ်းနဲစရာကောင်းတဲ့….. တောင်ကြီးမြို့လေးလောင်းပြိုင်ဈာပနမြင်ကွင်း… တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၄)၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ အိမ်အမှတ် (၁၁၈) ရှိ မြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆေးတိုက်နေအိမ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ နံနက် ၀၂:၀၀ အချိန်ခန့် ၌ အမည်မသိလူသတ်သမား၏ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက် …. လူမမယ်အရွယ် မောင်စိုင်းဖဖ […]
မြမြ ဝိညာဉ်ဝင်ပူးခံရသည့် မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ…. မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ ပြောပြီ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာ မြမြ၀င်ပူးခံရသူ မဇာခြည်လွင် နဲ့ မဝေဇင်ထွန်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် ….။ […]
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုး သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ သင်ထင်သလို တန်ဖိုးမကြီး လှပါဘူး ….။ တန်ဖိုးဆိုတာ သင့်စိတ်က သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ကြီးမားလာတာနဲ့ အမျှ တန်ဖိုးက တက်လာပါတယ်။ ပိုက်ဆံနှစ်ရာလောက်သာ တန်တဲ့ ဖောင်တိန် […]
သိန်း၅၀၀၀ရအောင်ဘယ်လို ပိုက်ဆံရှာခဲ့ရသလဲဆိုတာပြောပြသွားတဲ့ ပိုပို အခုတလော ပရိသတ်တွေကြားမှာရေးပန်းစားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ပိုပိုရဲ့သိန်းငါးထောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းပါ။ အဲဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုများ ရှာထားသလဲဆိုတာကိုလည်း ပရိသတ်တော်တော်များများကသိချင်ကြပါတယ်…။ သူကသူရဲ့အိမ်အကြောင်းနဲ့ ဒီပိုက်ဆုံတွေကိုဘယ်လိုစုထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို Myanmar Celebrity နဲ့ Cele ရပ်ကွက် တို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောပြသွားတာတွေရှိပါတယ်။ သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို မိတ်ဆွေတွေသိအောင်ပြန်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ပိုက်ဆံ သိန်း၅၀၀၀ကို […]
လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရ ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး ထားဝယ်မြို့နယ် ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၃၀ ရက် နေ့လယ် ၃ နာရီခန့်က က လူငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရောင်းမော်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရပါတယ် …။ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ရောင်းမော်ကျေးရွာတွင် ညနေ ၃ […]
သရဲ ခြောက်ကြမ်းတဲ့ နေပြည်တော်၊ ချိုင်းကျေးရွာက ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ကြီး သရဲအခြောက်ကြမ်းလှတဲ့ ချိုင်းကျေးရွာတောင်ဘက် တောင်ကုန်းပေါ်က ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ပါ။ ယခုအခါထိုဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ကို မည်သူမှညအိပ်စောင့်လျှောက်အိပ်မည့်သူမရှိဟု သိရပါသည်။ ယခင် ညစောင့်များဟာ တစ်ယောက်ထဲမအိပ်ဝင့်ကြ၍ နှစ်ယောက်အိပ်စောင့်ခဲ့ရပါတယ် …။ သရဲသည် ညနက်အချိန်များတွင် အနံဆိုးအပုတ်ဆိုးများပေးခြင်း/ ခွေးနက်ကြီးများယောင်ဆောင်ပြီး ကိုက်မည့် ဟန်ဆောင်ခြင်း/ စက်ခန်းအတွင်းမှအသံဆိုးကြီးများဖြင့် ခြောက်လှန့်ခြင်း […]
တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသူတွေပါ… မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူများက သတ်မှတ်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူ့ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတွေက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုပြုမူတတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်ဟာဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် […]
ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်လုပ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ( ၆ ) မျိုး တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင်ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ထွန်းကားနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က American Dream ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ စီးပွားရေးအသိုက်အမြုံကောင်းတစ်ခုကို […]
ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဗေဒင်ဟောနေတာကို လှောင်မြောင်မိတဲ့ လူငယ်အုပ်စုရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် မြို့ဒေါင့်စေတီပွဲဈေးတန်းမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် (သင်ခန်းစာ ယူသင့်ပါတယ်) မြို့ဒေါင့်စေတ်ီပွဲဈေးတွင် ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးက လူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက် က လှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြသည်။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲဒေါသထွက်လာပြီး “ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ၊ ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက် ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေ […]